साइबर क्राइम मुद्दामा पत्रकार चन्द र गुरुङले पाए सफाई – On Khabar
भदौ २४, काठमाडौं । बिधुतिय कारोबार सम्बन्धि साइबर अपराधको मुद्दा खेपिरहेका पत्रकार गोपाल चन्द र केबी गुरुङले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । समाचार लेखेकै अाधारमा पोष्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्द र संचालक केबी गुरुङले बिधुतिय कारोबार सम्बन्धि मुद्दा खेप्दै आएका थिए ।
१० महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गरेको हो । न्यायाधीश बिदुर कोइरालाको एकल इजलासले प्रतिवादी पत्रकार द्वय चन्द र गुरुङलाई सफाइ दिएको हो ।
सम्पादक चन्दलाई समाचार लेखेकै आधारमा गत मंसिर ११ गते पक्राउ गरि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाएको थियो । उनि १८ दिनेको हिरासत बसाइपछि रिहाइ भएका थिए ।
June 12, 2019 onkhabar
दार्चुला दुर्घटनाले उब्जाएको प्रश्न ? ११ जनाको मृत्यु (नामावालीसहित) !
अनखबर १८ फागुन, कैलाली । दार्चुलामा शुक्रबार राति भएको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ९ जनाको सनाखत भएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजारबाट दुहुँ गाउँपालिकाको हिकिलातर्फ जाँदै गरेको म १ ज २८० नम्बरको जीप राताकाठा भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ९ को सनाखत भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]
August 15, 2019 onkhabar